Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka oo kulan yeeshay – The Voice of Northeastern Kenya
Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka oo kulan yeeshay
Star FM October 14, 2016
Hogaamiyeyaasha isbahaysiga mucaaradka ah ee CORD ee kala ah Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa yeeshay kulan ay uga arrinsanayaan sidii ay u xalin lahaayeen mushkiladda ka dhex aloosan isbahaysigooda, taasoo salka ku heysa kala aragti duwanaanshaha cidda u noqoneysa musharaxa xilka madaxweynaha ugu tartami doona doorashada guud ee lagu wado in ay dalka ka dhacdo sanadka soo socda ee 2017-ka.
Odinga iyo Musyoka ayaa kulankooda uga hadlay sidii ay u xaqiijin lahaayeen in lasoo af jaro cabsida laga qabo sii jirintaanka midnimada isbahaysiga ugu weyn mucaaradka, hadii uu sii socdo khilaafkaasi.
3-da hogaamiye ee ugu sareysa CORD Raila Odinga, Kalonzo Musyoka iyo Moses Wetangula oo kala hogaamiya xisbiyada ODM, Wiper iyo Ford Kenya ayaa dhammaantood doonaya in ay calanka u qaadaan isbahaysigooda.
Gudi gaar ah ayaa la filayaa in loo xil saaro kala doorashada 3-da hogaamiye, si ay go’aan uga gaaraan midka loo caleema saarayo musharaxnimada, ee la tartami doona madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Mr Musyoka oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka ayaa dhankiisa sheegay in uu jagadaas u hanqal taagayo, hase ahaatee uu taageeri doono 2-da hogaamiye ee kale hadii mid ka mid ah lasoo xusho.
Kulanka hogaamiyeyaasha CORD ayaa yimid xili siyaasiga madaxa ka ah xisbiga mucaaradka ah ee Amani Musalia Mudafadi uu isagana damacsanyahay in uu heshiis la galo isbahaysiga CORD.
← Qoomiyadaha Makonde iyo Mapempa oo sharciga aqoonsiga helaya bisha December
30 qof oo ku dhimatay dagaal ka dhacay Africada dhexe →